Vinnitsa - Study in Ukraine. Xarunta Admission Yukreeniyaan
Vinnitsa waa xarunta gobolka Vinnitsa ah, magaalo la dhaqanka hodanka ah iyo taariikhda, waxa uu ku yaalaa ku laysaan of dhaqaalaha, bulshada, loolalka geopolitical of Ukraine. Magaalada waxa uu ku yaalaa on webiga qarkiisa Southern bahal ah, 260 km xagga koonfureed oo dalka Kiev, caasimadda ah ee Ukraine (4 saacadood tareen), 14 saacadood tareen ka Moscow iyo 6 – ka Odessa.
Magaalada waxaa ku xiran by Waddooyinkiisa tareenka iyo hawada si galbeedka Yurub iyo dalal kale. heerkulka celcelis ahaan xilliga qaboobaha -5 -7 °, xagaaga – +20 +27° c. Vinnitsa loo yaqaan magaalada ardayda ee Ukraine, waa faani hay'adaha sida waxbarasho fiican sida: Vinnitsa jaamacadda DTU, koriska University, University Dhaqaalaha Ganacsiga, Beeraha University iwm.
gobolka Vinnitsa waxaa la aasaasay on February 27, 1932. Waxay leedahay aag of 26500 km2 (4,5 % dhulka ee Ukraine). Tirada dadka ee samaysyada gobolka 1,815,000 , ay ka mid yihiin dadka magaalooyinka - 882,000. gobolka Vinnitsa waxa uu ku yaalaa aaga kaynta-steppe xadka ah oo kuraha Podolsk. Waxaa jira ku dhawaad 204 Wabiyaal gudahood gobolka, dheeraad ah oo ka badan kasta 10 km oo dherer ah, iyo labada waaweyn waa bahal ee Koonfurta iyo Dniester ah. Vinnitsa leedahay jawi dhexdhexaad ah qaaradda leh xagaaga qoyan diiran jiilaalka khafiif ah iyo. Shan jaamacadaha, 453 goobaha caafimaadka, 31 -Jiga caafimaadka waxaa shaqeeyaan. Tiyaatar – 2, shineemooyinka, xarumaha dhaqanka, kooxaha – 1256. Taxadiri taariikhda iyo dhaqanka – 3144, matxafyada – 20. museum ee N.I Dhakhtar caan dunida. Pirogov waa mid aad loo jecel yahay, jidhkiisa waxaa la mariyey oo waa la hayaa wareegga aaska dhow matxafka.
The magaalada iska leh gobollada maalgashi ugu soo jiidashada badan ay sabab u tahay kara warshadaha iyo sare sayniska xoog, network gaadiidka horumaray, nidaamka bangiyada a, cimilada wanaagsan ganacsiga.